Wiilka Madaxwayne Siilaanyo Sodoga U Yahay Oo Noqday Gacan Yare Imaraatka Carabta U Dhago Nugul+Qorshayaasha Iibka Hantida Qaranka | Saxil News Network
Wiilka Madaxwayne Siilaanyo Sodoga U Yahay Oo Noqday Gacan Yare Imaraatka Carabta U Dhago Nugul+Qorshayaasha Iibka Hantida Qaranka
March 16, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa(Saxilnews):-Tan iyo intii uu xukunka Talada dalka qabtey Madaxwayne Siilaanyo waxa taladii dalku ay gacanta u gashay shaqsiyaad danaysteyaal ah iyo sidoo kale xubno u badan haween kuwaasi oo ay ka go’do talada guud ee dalku.
Mudooyinkii ugu dambeeyeyna waxa dhagaha bulshada Somaliland ku soo noq noqaayey iibka Meelihii ugu muhiimsanaa dalka oo gacanta loo galiyey niman Carbeed oo heshiisyo aan wali si cad loo bayaamin ay shaqsiyaad Madaxwaynaha isku dhow yihiin ay u soo saxeexeen.
Baashe cawil u Diranaha Imaraatka Carabta
Iibka iyo dhaxal wareejinta Hantida Qaranka ee Umada Somaliland wada leedahay ayaa bilaabantey markii xilka Safiirka Somaliland u fadhiya Dalka Imaaraatka Carabta loo magacaabey Baashe Cawil Moorgan oo qaba Gabadh uu dhalay Madaxwayne Axmed Siilaanyo.
Tan iyo xiligaasina waxa u si badheedh ah dalka u keenay Ganacsato Carbeed oo ay isaga heshiis ku yihiin sidii loo qaybsan lahaa dheefta Goobtaasi uga soo baxda Carab iyada oo dhanka kale uu dilaalkiisa ku leeyahay inta Somaliland ku yeelanayso dhinaca Heshiiska ay goobaha muhiimka ah ugu wareejinayso Imaaraatka.
Inkasta oo dal ahaan ay u wanaagsan tahay Maalgashiyo Caalami ah balse waxa ay wax walba u baahan yihiin Bayaamin iyo sidii shuruucda caalamiga ah loo waafajin lahaa heshiisyada ay la soo galayaan shaqsiyaadka danaha wata cida u han qal taagaysa maalgashi.
Baashe Cawil ayaa isagu dhankiisa waxa uu heshiisyo qarsoodi ah kula jiraa madaxda dalka Imaraatka Carabta si fududna ugu dhago nugul waxa u suuro gashay in uu si rasmi ah gacanta ugu galiyey Dekedii Berbera iyo qaybta saldhiga oo haatan gabo gabo ugu dhow,
Halka Qorshaha sadexaad ee loo balansan yahay in uu gacanta Carabta Imaarada Dubai usoo gacan galiyo ay tahay Warshada Sibidhka ee Magaalada Berbera.
Madaxwayne Axmed Siilaanyo oo isagu ah masuulkii dalka loo doortey ayaan wali lagu arag wax dhaq dhaqaaq aa hadalo uu bulshadii dooratay ugu bayaaminaayo heshiisyada mad-madowga badani ku jiro ee uu soo saxeexey wiilka uu sodoga u yahay iyo Shaqsiyaad kale oo reer Somaliland.